Shir dhexmaray Beesha Dhulbahante iyo Geri oo lagu qabtay Magaalada Minneapolis.
Shir si wacan loo soo agaasimay ayaa ku dhaxmaray labada beelood ee Dhulbahante iyo Geri Koombe bishii la soo dhaafay July 6 dii magaalada Minneapolis ee gobolka Minasota.
Shirkaasi oo lagaga wada hadlay wax wada qabsiga iyo iskaashiga ku aadan hurumarinta danaha deegaanada labada beelood ee walaalaha ah, ayaa waxaa ka hadlay oadayo dhaqameedyo, waxgaradka iyo xubno ka socday labada beelood.
Shirkaasi oo lagu qabtay Hoteelka … ee magaalada Minneapolis, waxaa markii u horeysay hadal soo dhaweyn ah ka jeediyay Md. Maxamed Xasan oo ah Afhayeenka beesha Dhulbahante ee waqooyiga Ameerika isaga oo uu Md, Maxamed Xasan u mahad naqay dhamaan dadka ka soo qayb galay shirkaasi iyo intii soo qaban qabisayba. Waxa uu Maxamed tilmaamay muhiimada uu leeyahay in shir noocan oo kale ah la qabto, oo laga wada hadlo isu soo dhaweynta iyo wax wada qabsiga labada beelood ee walaalaha ah. Kadib Maxamed wax uu hadalkii ku wareejiya Md. ….. oo ka mid Odayo dhaqameedyada beesha Dhulbahante ee degaanka Minasote ee dalkan Maraykanka. Waxaana Md. uu ka hadlay sida loogu baahan yahay wax wada qabsiga iyo danaha labada beelood ee walaalaha ah.
Kadib hadladaasi soo dhawenta ah waxaa ka hadlay oo lagu soo dhaweeyay madasha shirka Amb. C/Laahi Siciid, Sheekh Maxamuud Garaad Cusmaan, Xasan C/Laahi iyo Nuur Ibraahim oo ka socday dhinca beesha Geri.
Waxay dhamaan ku nuuxnuuxsadeen taariikhda dahabiga ee labada beelood ay wadaagaan, gaar ahaan dhinaca wadaniyaad iyo halganadii dheeraa ee ay u soo galen xornimo u dirirka Soomaaliyeed haday noqota halgankii Daraawiishta iyo Axmad Guray.
Waxa kale oo dhamaan ay ka hadleen sida loogu baahan ayahay iskaashiga labada beelood ee dhinaca nabada, hurumrinta degaanda ay ka soo jeedaan.
Xafaldasi waxaa xiriiriye ka ahaa Md.
Sawirada (Mr. Khaliil)